InVideo: U Samee Fiidiyowyo Xirfad-yaqaan Khaas u ah Warbaahinta Bulshada Daqiiqado gudahood | Martech Zone
Podcasting-ka iyo fiidiyowga labaduba waa fursado layaableh oo lagula falgalayo dhagaystayaashaada si aad u xiiso badan oo madadaalo leh, laakiin xirfadaha hal-abuurka iyo tifaftirka ah ee loo baahan yahay waxay ka fogaan karaan meheradaha badankood - oo aan lagu xusin waqtiga iyo kharashka.
Gudaha Video wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha tifaftiraha fiidiyowga ee aasaasiga ah, laakiin leh astaamaha lagu daray ee wada shaqeynta iyo tusaalooyinka jira iyo ilaha jira. InVideo waxay leedahay in ka badan 4,000 oo ah fiidiyowyo horay loo sameeyay iyo malaayiin hanti ah (sawirro, maqal, iyo fiidiyowyo fiidiyoow ah) oo aad si fudud wax uga beddeli karto, u cusbooneysiin karto, ugana soo dejisan karto si ay kaaga caawiso abuuritaanka xirfad-yaqaanno horudhac ah, dibedda, xayeysiis fiidiyow ah, ama fiidiyowyo dhan oo la isticmaalo loogu talagalay warbaahinta bulshada.
InVideo waa ujeedo loo dhisay ganacsiyada, xirfadlayaal suuqgeyn, iyo xirfadlayaal iib ah si ay si fudud ugu abuuraan una daabacaan fiidiyowyadooda. Barxaddu waxay awood kuu siineysaa inaad ku habeysid koontadaada qaabka qaabeynta oo aad u isticmaasho kiisaska si markaa tusaalooyinkaas loo kala hor mariyo.
Waxaad sidoo kale ku habeyn kartaa koontadaada astaantaada, fartaada, iyo midabadaada aasaasiga ah si ay si fudud ugu adeegsadaan sheybaarkaaga. Fiidiyow kasta, waxaad ku dari kartaa codkaaga, fiidiyowga, maqalka, ama sawirrada aad jeceshahay inaad ku darto - sidaa darteed kuma xadidnayn sheybaladooda ama maktabadda hantida.
Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa xisaabaadkaaga Facebook, Twitter, iyo Youtube isla markaana si toos ah uga daabici kartaa shabakadooda markaad dib u eegto oo aad oggolaato fiidiyowga la soo gabagabeeyay.
Ka hel 25% Diiwangalintaada Vidiyo
Qodobka Tifaftirka Fiidiyowga
Mid ka mid ah aaladaha cajiibka ah ee ay leeyihiin ayaa ah awoodda nuqul ama dhajinta qoraalka, ama xitaa xoqista qoraalka maqaalka. Marka, haddii aad rabto inaad abuurto fiidiyowyo gaagaaban, oo kooban oo ku daraya qodobbada muhiimka ah ee maqaalkaaga si aad ugu dhiirrigeliso warbaahinta bulshada.
Dhis Fiidiyeyaasha Liiska
Mid ka mid ah adeegsiga weyn ee tan ayaa ah sameynta fiidiyowyo liis garaysan ah… kuwaas oo caan ku ah baraha bulshada. Waxaan awooday inaan ku dhiso fiidiyowgan qiyaastii 10 daqiiqo, anigoo soo dhigaya shaashadeyda shaashadda isla markaana adeegsanaya mid ka mid ah tusaalooyinka liistada badan ee 'InVideo':
Isku xirka sheekada sheekada ee abuurista sheekooyinka ama liis garaynta ayaa ah mid caqli gal ah oo si fudud loo isticmaali karo. Xitaa waad ku dhejin kartaa qoraalkaaga oo waad ku dhajin kartaa iyada oo ku saleysan qaabka!
Fiidiyeyaasha Intro iyo Outro oo leh astaamo muujinaya astaan
Maanta, waxaan awooday inaan wax ka beddelo oo naqshadeeyo astaan ​​yar oo animated ah oo muujinaysa tan Martech Zone fiidiyowyada adoo adeegsanaya astaanta InVideo ayaa muujinaya shaxanka:
Waxaan awooday inaan wax ka beddelo noocyada qoraalka, waqtiyada walxaha kasta, iyo animation-ka si aan u qaabeeyo fiidiyoow macaan oo qurux badan oo aan hadda ku dari karo dhammaan fiidiyowyada aan ku daabacayo Youtube!
Sida Loo Sameeyo Fiidiyow Qaabka InVideo
Isku xirka adeegsadaha si aad uhesho fiidiyowgaaga waa mid aad u fudud… dooro shaxanka horay loo sameeyay, qaab qoraal ah oo fiidiyoow ah, ama kaliya ku bilow shiraac maran.
Haddii aad raadineysid sheybaar, kaliya gali dhowr eray oo muhiim ah si aad u raadiso mid. Waad riixi kartaa oo aad ciyaari kartaa mid kasta oo ka mid ah natiijooyinka si aad u hesho shaxanka aad rabto inaad ku bilowdo.
Xulo cabirka fiidiyowga - ballaaran (16: 9), laba jibbaaran (1: 1) ama toosan (9:16).
Xulashadaada, sameyso fiidiyowga, ka dibna waad soo dejisan kartaa ama si toos ah ugu daabici kartaa Facebook, Twitter, ama Youtube.
Haddii aad rabto inaad sii habeyso fiidiyowga dheeraad ah, waa kuwan socod wanaagsan ee xulashooyinka madal. Runtii ma jiraan wax xadeyn ah haba yaraatee!
Haddii aad rabto inaad sii habeyso fiidiyowga dheeraad ah, waa kuwan socod wanaagsan ee xulashooyinka madal. Runtii ma jiraan wax xadeyn ah haba yaraatee! Oo… ma rumeysan doontid qiimaha madasha the waa wax aan caadi aheyn.
Oh… iyo maadaama aad tahay a Martech Zone aqriste, waxaad heli doontaa 25% kale marka aad isticmaaleyso xiriiriyaheyga:
Afeef: Anigu waxaan ahay Gudaha Video kuxiran (iyo macaamil) waxaanan isticmaalayaa iskuxirahayga maqaalkan.
Tags: Facebook ad video abuurahaFacebook ad video sameeyetafatiraha fiidiyowga instagramdejinta introduulaancasumaad sameeyaha fiidiyowgaliistada liiskaabuure video onlinetifaftiraha fiidiyowga ee internetkasoo saarahasoo saaraha fiidiyowgavideo gaabanfiidiyowga warbaahinta bulshadafiidiyowga bulshadaabuuraha xayeysiiska videosameeyaha xayeysiiskasameeyaha fiidiyowgatusaalooyinka fiidiyowgaYouTube hordhaca sameeyahaAbuuraha fiidiyowga YouTube
BEE: Ku Dhis oo Kala Soo Deg Emailkaaga Taleefonka ah ee Ka Jawaabta Khadka Tooska ah Bilaash